Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Maanta – Garsoore Sports
Suuqa kala-iibsiga xagaaga 2021 waxaa uu soo xirmayaa 31 bishan Ogoosto, horyaaladda kubbada-cagta waa ay billoowdeen kooxo qaar ayaana saxiixyo waaweeyn sameeyay kahor bilaabashada ololaha 2021-22, waxaana kooxo badan ay ogaadeen durbaba waxa ay suuqa uga baahanyihiin kaddib kulamadii ugu dambeeyay.
Haddaba waxaan idiinsoo gudbineynaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala-iibsiga horyaaladda waaweeyn ee Yurub ee warbaahinta maanta wax ka qortay.
Paris St-Germain ayaa Real Madrid ka doonaysa £ 188 milyan oo ginni si ay uga iibiso 22 jirka Kylian Mbappe. (Le Parisien)
Manchester City ayaan meesha ka saarin inay lasoo saxiixato weeraryahanka Juventus iyo Burtuqiiska ee Cristiano Ronaldo, oo 36 jir ah, kaddib markii kabtanka Ingiriiska Harry Kane uu mustaqbalkiisa dhow u hibeeyay Tottenham. (ESPN)
Wakiilka Ronaldo Jorge Mendes ayaa sheegay in kiliyentigiisa uu aad u doonayo inuu ka tago kooxda ka dhisan Turin, wuxuuna raadinayay koox dooneysa inay 25 milyan oo ginni ku iibsato 36 jirkaan isla markaana bixiso mushaarkiisa, taasoo ay City diyaar u tahay inay sameyso. (Sky Sports)
Dhanka kale, Kane ayaa ka xumaaday in guddoomiyaha Tottenham Daniel Levy uu ogolaan waayay inuu kooxda ka tago xagaagan, 28 jirkaan ayaana laga yaabaa inuu qandaraas cusub u saxiixo kooxda oo ay ku jirto lacagta lagu burburin karo qandaraaskiisa. (Telegraph) + Faahfaahin
Kooxda Chelsea ayaa qiimaysay weeraryahanka reer Norway iyo kooxda Borussia Dortmund ee Erling Haaland xagaagan xilli wakiilkiisa Mino Raiola dalbaday mushaharka rikoorka Premier League ee 21 jirkan iyo lacag aad u badan oo ku baxaya iibkiisa kaas oo ah £275m.
Pep Guardiola ayaa ka tagi doona Manchester City marka uu dhammaado heshiiskiisa haatan kaddib xilli ciyaareedka 2022-23 wuxuuna ka nasan doonaa kubadda-cagta kahor inta uusan noqon tababare xul qaran. (Evening Manchester)
Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaan halis ugu jirin in uu waayo shaqadiisa maadaama 5 kulan oo fursad ah la siiyay inkasta oo ay Gunners si xun ku bilaabatay horyaalka premier League-ga. Tababarihii hore ee Chelsea Antonio Conte ayaa lala xiriiriyay inuu beddeli doono. (Independent) + Faahfaahin
Kooxda Liverpool ayaa ka fiirsanaysa in ay u dhaqaaqdo saxiixa xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Sevilla ee Lucas Ocampos inkasta oo ay Wolves xiiso u qabto xiddiga reer Argentina oo 27 jir ah (Star).
Tababaraha Roma Jose Mourinho ayaa qorsheynaya inuu 13.5 milyan oo ginni ku dalbado xiddiga qadka dhexe ee Chelsea Ruben Loftus-Cheek. 25 jirkaan ayaa muddo kooban lasoo shaqeeyay Mourinho intii uu tababaraha reer Portugal joogay Blues. (Mail)
Manchester United ma awoodi doonto inay dalbato midkood xiddiga qadka dhexe ee Rennes Eduardo Camavinga, oo 18 jir ah, ama qadka dhexe ee Atletico Madrid iyo Spain Saul Niguez, oo 26 jir ah, haddii aysan iibin ugu yaraan hal ciyaartoy si ay dhaqaale u ururiyaan. (ESPN)
Chelsea ayaa loo malaynayaa inay ugu cad-cad inay lasoo wareegto Niguez, iyadoo Atletico ay u furan tahay inay iibiso xiddiga reer Spain. (Express)
Kooxaha Barcelona iyo Atletico Madrid ayaa labaduba muujiyay xiisaha ay u qabaan saxiixa xiddiga qadka dhexe ee kooxda Manchester City Bernardo Silva xagaagan. Labada naadi ayaa la sheegay inay doorbidayaan heshiis amaah ah oo ay ku qaataan 27 jirkaan. (90Min)
Sevilla ayaa sheegtay inay iska diiday dalab uga yimid Chelsea oo ku aadanaa 22 jirka daafaca Faransiiska Jules Kounde mana u baahna inay iibiyaan ciyaartoy. (Goal)
Chelsea iyo RB Leipzig ayaa suuragal ah inay u dhaqaaqaan xiddiga qadka dhexe ee Barcelona Ilaix Moriba haddii 18 jirka reer Guinea uusan cusbooneysiin heshiiska uu kula jiro kooxda La Liga ka dhisan. (Mundo Deportivo)
Xiddiga garabka uga ciyaara Arsenal iyo Brazil Willian, oo 33 jir ah, ayaa isku dayaya inuu u dhaqaaqo kooxda Corinthians. (The Sun)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Barcelona iyo xulka Spain Sergio Busquets ayaa ogolaaday in la dhimo mushaarkiisa si uu kooxda uga caawiyo reer Spain isku dheelitirka biilka mushaharka. (ESPN)
Ciyaaryahankii hore ee Arsenal iyo Ingiriiska Jack Wilshere, oo 29 jir ah, ayaa sheegay inuu ka fikirayo inuu ciyaaraha ka fariisto markii uu waayay koox soo dalbata kaddib markii ay fasaxday kooxda heerka labaad ee Bournemouth. (Athletics)
Wolves ayaa dooneysa inay kusoo biirto loolanka loogu jiro saxiixa daafaca Lille iyo Netherlands Sven Botman, oo 21 -jir ah, iyadoo ciyaaryahankan hore loola xiriiriyay kooxaha Tottenham iyo Liverpool . (HITC)